Ntuzi akwukwo EC-Council: Akwukwo - ITS Tech School
Ihe ndekọ EC-Council: A na-atụ anya ka ọrụ EC-Council Certified Incident Handler na-enye ma gbasaa na ahụike iji mesoo ma meghachi omume na nchedo PC na ngalaba ọrụ. Usoro a na-ekpebi ụkpụrụ dịgasị iche iche na usoro iheomume maka ịmata na ịzaghachi ihe ize ndụ ndị PC nwere ugbu a ma nwee ike.
Njikọ ndị nwere nchedo na-eme ihe dị iche iche nke izo ya ezo - nchekwa nzuzo nke data, ezipụ ụda VoIP, encryption nwere ike iwepụ, ezoro ezo Wi-Fi, ezoro ezo email, ndekọ nkesa - ihe nkesa / desktọọpụ, kpuchie jikọtara encryption, nkesa nzuzo weebụ, n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-abụkarị ihe amamihe dị na ya iji iji nchekwa dịgasị iche iche iji jide n'aka na ọhụụ ọ bụla zuru oke na gburugburu gburugburu.
Ihe kachasị emetụ n'oge nchebe nchebe emeela ka ha bụrụ ihe dị otú a - ha niile enweghi ma ọ bụ ihe nzuzo ezoro ezo. O meela ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke dollar ghara ịdaba n'akụkụ ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Tinye aha na egwu nke na emebi emebi na-emetuta mkpali n'etiti. Okwu ole na ole bụ - SONY PS3, RSA, iPhone, LinkedIn.
Nkwekọ ECES maara ndị na-asọmpi na-eji usoro mkpuchi ọnụ, dịka ọmụmaatụ, Feistel Networks, DES, na AES, n'etiti ndị ọzọ.
Ndị nyocha ga-amụta nchebe nchebara oke dịka ọ na-emetụta cryptography
Ndị nyocha nwere ike ịma usoro ndị na-eme ihe dị ka MD5, MD6, SHA, Gost, RIPMD 256 na ndị ọzọ
Dị ka ihe atụ, usoro mkpu cryptography, RSA, Elgamal, Elliptic Curve, na DSA